M/weynaha Puntland oo xilalkii ka qaaday guddoomiyayaasha gobollada Mudug iyo Cayn. [Akhris …] – Radio Daljir
M/weynaha Puntland oo xilalkii ka qaaday guddoomiyayaasha gobollada Mudug iyo Cayn. [Akhris …]
Galkacyo, Aug 11- Labo wareegto oo maanta ka soo baxay xafiiska m/weynaha dawladda Puntland Dr. C/rixmaan Maxamed Maxamuud ?Faroole?, ayaa xilalkii looga xayuubiyey guddoomiyayaashii gobollada Mudug iyo Cayn ee maamulka Puntland.
Guddoomiyayaasha xilalka laga qaaday ayaa kala ahaa C/nuur Maxamed Diiriye ?Geesey? oo ahaa guddoomiyihii gobolka Mudug iyo Kayse Cabdi Yuusuf oo isna ahaa guddoomiyihii gobolka Cayn.
Labada guddoomiye ayaa shaqada ka cayrintooda m/weynuhu u cuskaday qodob dastuuri ah, waxaana jiray eedaymo kala duwan oo hay?adaha ku shaqada lahi maamullada gobollada u soo jeediyeen mas’uuliyintaasi, waxaana guddoomiyaha gobolka Mudug lagu eedeeyey in uu qayb ka yahay dhibaatooyinka amni darro ee ka jira gobolka Mudug sida ku cad qoraalka m/weynaha.
Waxaana sidoo kale ka mid ah waxyaabaha madaxweynuhu u adeegsaday xil ka qaadista guddoomiyaha gobolka Mudug, talo soo jeedin ka timid wasaaradda arrimaha gudaha oo tilmaamaysay xil ka qaaditiisa, waxaana isla warqaddaasi si ku meel gaar ah xilkaasi loogu sii magacaabay guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee gobolka Mudug Beexaani Axmed Barre.
Dhanka kala guddoomiyaha gobolka Cayn ee isna maanta xilka laga qaaday Kayse Cabdi Yuusuf, ayaa m/weynuhu xil ka qaadistiisa u cuskaday qodob dastuuri ah, waxaana lagu eedeeyey in uu gudan waayey shaqadii loo idmaday ee ahayd maamulka gobolka Cayn.
Md. Kayse, ayaa warqadda xil ka qaadistiisa lagu sheegay in uu muddo dheer ka muqnaa xafiiskiisa, isla markaana uu ku tallaabsaday falal liddi ku ah anshaxa suubban, waxaana taas u sii wahelisay sida ku cad qoraalka m/weynaha maamul xuno iyo kala danbayn la?aan xagga maamuuska ah.
Sikastaba ha?ahaatee, xilka qaadista guddoomiyaha gobolka Mudug ayaa timid xilli lagu muransanyahay joogitaankiisa gobolka Mudug ama halka uu ku sugan yahay, waxaana shir jaraa?id uu ku qabtay magaalada Galkacyo xilka qaadistiisa kadib ku sheegay in uu ku qanacsan-yahay xilka maanta laga xayuubiyey.